युरिक एसिड हुनुकाे मुख्य कारण यस्ताे पाे रहेछ, एकचाेटि पढाैँ - ज्ञानविज्ञान
जाडो याम सकिएपनि गर्मी बढेको छैन । चिसो मौसममा हाड जोर्नी दुख्छ, खासगरी प्रौड उमेरका व्यक्तिलाई । युरिक एसिडको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरुमा समस्या ल्याउँछ र ‘गाउट’ भन्ने रोग लाग्छ । युरिक एसिडलाई एक प्रकारको बाथरोगका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। युरिक एसिड रगतमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो ।
यद्यपी सामान्य दिनमा पनि यस्तै समस्या बल्झिरहन्छ भने शकां गर्नुपर्छ, युरिक एसिडको । बेलाबखत हाड जोर्नी दुख्नु सामान्य हो । बढी शारीरिक श्रम गरेको बेला पनि यस्तो समस्या हुन्छ । तर, सामान्य अवस्थामा हाड जोर्नी दुख्ने समस्या ज्यूँको त्यूँ रहन्छ भने यसको उचित उपचार खोज्नैपर्छ ।
यो समस्या ३० वर्षको उमेर पार गरेका व्यक्तिहरुलाई धेरै हुने गर्छ । जब कुनै कारणवस मिर्गौलाले रगतमा भएका विभिन्न रसायनलाई राम्ररी छान्न सक्दैन, तब रगतमा रहेको युरिया युरिक एसिडमा परिवर्तित हुन्छ । सामान्यतया युरिक एसिड शरीरको कोशिका तथा हामीले खानेकुराबाट बन्छ ।
त्यसमध्येको धेरैजसो एसिडलाई मिगौलाले छानेर पिसाबद्वारा शरीरबाट बाहिर फाल्ने गर्छ । तर कुनै कारणवस मिर्गौलाले उक्त एसिडलाई छान्न नसके यसले रगतमा युरिक एसिडको स्तरलाई बढाउने गर्छ । जसका कारण युरिक एसिडको समस्या निम्तिने गर्छ ।
एक स्वस्थ महिलाको शरीरमा युरिक एसिडकोस्तर २.४-६.० मिलीग्राम प्रति डेसीलिटर भएमा यसलाई सामान्य मानिन्छ । त्यस्तै, पुरुषमा युरिक एसिडको स्तर ३.४ देखि ७.० मिलीग्राम प्रति डेसीलिटर भएमा त्यसलाई सामान्य भनिन्छ । शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढेमा मांसपेशी सुन्निनुका साथै जोर्नी दुख्ने, औला सुन्निे गर्छ । समयमै यसको लक्षण थाहा पाएर पनि यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
के हो युरिक एसिड ?
युरिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन तथा नाइट्रोजन जस्ता तत्व मिलेर बनेको हुन्छ । यो शरीरमा रहेको प्रोटिनबाट एमिनो एसिडको रुपमा प्राप्त हुन्छ , यसको मात्रा पिसाबद्धारा शरीरबाट बाहिरिने गर्छ । तर जब शरीरमा यसको मात्रा बढ्छ, तब यो शरीरभित्र जम्मा हुनथाल्छ र हड्डीमा क्षति पुर्‍याउने गर्छ । युरिक एसिड भएमा आर्थराइटिस हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ यो समस्या ?
शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने व्यक्तिलाई युरिक एसिडको सम्भावना उच्च हुन्छ । त्यस्तै, खानामा प्रोटिनको कमी भएमा पनि युरिक एसिडको समस्या निम्तिन सक्छ ।यसको जोखिम कम गर्न समयमा खाने तथा सन्तुलित आहार खानु पर्छ ।
खुट्टाको बुढी औँला र आसपासका जोर्नीहरु सुन्निनु ।
जोर्नी राति बढी दुख्नु ।
दुखाइ सहनै नसक्ने हुनु ।
लामो सयम युरिक एसिडको समस्या भएकालाई घुँडा, कुइनो लगायतका जोर्नीहरुमा पनि दुख्नु ।
ज्वरो आउनु, आदि ।
किन हुन्छ समस्या ?
तनाव, अत्याधिक मात्रामा मदिराको सेवन, लामो समयसम्म भोकै रहने, व्यायामको कमी, शरीरमा पानीको कमीले पनि यो समस्या निम्तिने गर्छ । त्यस्तै, रेड मिट, सी फूड, गेडागुडीको सेवन तथा विशेष प्रकारका केही औषधीको सेवनले पनि युरिक एसिडको समस्या निम्तिने गर्छ । त्यसैले, खानामा के खाने, के नखाने भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । खानामा विशेष सजगता अपनाएर पनि युरिक एसिडको समस्या हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
चामल, गहुँ, मकै, आलु, पाउरोटी, चिनी
हरियो सागपात (सिमी, बोडी बाहेक)
काजु, ओखर, पेस्ता, बदाम
खाना पकाउँदा वटर वा भेजिटेबल आयलको सट्टा ओलिभ -जैतुन)को तेल प्रयोग गरेर पनि यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ । किनकी जैतुनको तेलको प्रयोगले शरीरमा अतिरिक्त युरिक एसिड जम्मा हुँदैन । यो मुटुको लागि पनि लाभदायक मानिन्छ ।
शरीरमा युरिक एसिडको मात्रालाई कम गनए दिनमा कम्तीमा पाँच सय ग्राम भिटामिन ‘सी’को सेवन गरेर पनि यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ । नियमित रुपमा भिटामिन ‘सी’को सेवनले एक, दुई महिनामै यूरिक एसिडको स्तर कम हुन थाल्छ ।
आर्थराइटिस र युुरिक एसिडको समस्या ज्वानोको प्रयोग प्रभावकारी मानिन्छ । ज्वानोमा एन्टीअक्सिडेन्ट तथा डाईयुरेटिक गुण हुन्छ, जसले दुखाई कम गन मद्दत गर्छ । यसमा एन्टीसेप्टीक गुण पनि हुने भएकोले यो समस्यामा ज्वानोको प्रयोग द्धारा प्राकृतिक उपचार गरिन्छ ।
रातो मिला मिर्च, खुर्सानी, टमाटर, व्लुबेरी, ब्रोकाउली तथा अंगुर आदीमा एन्टीअक्सिडेन्ट भिटामिन भरपूर मात्रामा हुन्छ । एन्टीअक्सिडेन्ट भिटामिनले पि|m रेडिकल्सलाई शरीरमा हमला गर्नबाट रोक्छ । जसले गर्दा शरीरमा युरिक एसिडको स्तर कम हुन पुग्छ ।
स्याउको रसले रगतको पीएच लेभललाई बढाएर युरिक एसिडको स्तरलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । तर त्यसको लागि प्रयोग गरिने स्याउको रस काचै र पानी नमिसाएकै हुनु पर्छ ।
शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा उच्च भएमा बेकरी प्रोडक्ट तथा स्याचुरेटेडेड फ्याटले यसलाई झनै प्रभावित पार्दछ । त्यसैले, शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा उच्च भएमा केक, पेस्ट्री, कुकिज जस्ता स्याचुरेटेड तथा ट्रान्स फ्याटयुक्त खाद्य पदार्थ खानबाट बच्नु पर्छ । त्यस्तै, मदिराको सेवन गर्नबाट पनि बच्नुपर्छ ।
कतिपय अवस्थामा डब्बामा राखिएको खानेकुराले पनि युरिक एसिडको समस्यालाइ प्रभावित पार्न सक्छ । त्यसैले, यस्ता खानेकुरालाई वर्जित गरेर पनि यो युरिक एसिडको समस्या जटिल हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
यसबाहेक, माछा तथा मासुको सेवन नगरेर पनि यो समस्याबाट बच्न सकिन्छ । किनकी रेड मिट तथा सारडिनेस, म्याकिरिल नामक माछामा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ । र, यसको हल्कामात्र सेवनले पनि युरिक एसिड बढ्न सक्छ ।
Don't Miss it हङकङले बनायाे काेराेना भाइरसकाे खाेप, पढाैँ खुशीकाे खबर
Up Next हाम्राे शरिरकाे मुटुपछिकाे महत्त्वपुर्ण र्पाट कलेजो कसरी स्वस्थ राख्ने ?
रक्तदान गर्ने गर्नु भा छ ? रक्तदान गर्नुस् यस्ता नसाेचेका फाइदाहरु पाउनुहुनेछ । एकचाेटि पढाैँ
हरेक दोस्रो सेकेन्डमा कुनै न कुनैलाई रगतको आवश्‍यकता हुन्छ । तपाईको रगत एक समयमा एकभन्दा अधिक जिन्दगी बचाउनमा सहायता गर्छ…
10 hours ago biplov
जाडो याम सकिएपनि गर्मी बढेको छैन । चिसो मौसममा हाड जोर्नी दुख्छ, खासगरी प्रौड उमेरका व्यक्तिलाई । युरिक एसिड कसलाई, किन र कसरी हुन्छ ?
कुर्सी टेवलमा भन्दा पलेटी कसेर खाना खानुका यस्ता चमत्कारिक फाइदा
जमिनमा बसेर खाना खाने हो भने धेरै फाइदाहरू हुने स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको दावी छ । जमिनमा बसेर खाना खाँदा एक विशेष…
टुसायुक्त खानेकुरा खानुका फाइदै फाइदा – यसमा पाइन्छ यो भिटामिनको भण्डार
टुसायुक्त खानाका फाइदा -पोषणयुक्त भोजनले दिन्छ । – यसले बूढो हुने गति मन्द पार्नुको साथै मानिसलाई सुन्दर स्वस्थ र रोगमुक्त…
तपाईलाई कफी कतिकाे मनपर्छ ? कफी पिउँदा हुने केहि फाइदाहरु यास्ता छन्
विशेष गरी शहरी जीवनमा दिनको सुरुवातको अत्यावश्यक चिज बन्दै गएको कफीको प्रियता बिस्तार हुँदैछ । कफी पिउनेहरुको जमात ठूलो छ…
हरियो मकै खानुका फइदाहरू यस्ता छन्
मकैमा शरिरको पोषणका लागि आवश्यक सबै प्रकारको मिनरल्स पाइन्छ । मकै यस्तो खाद्य पदार्थ हो जसले मानिसको स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा…
अन्डाको सेतो भाग खानुहोस्, पहेँलो भन्दा यसका फाइदै फाइदा छन्
भरपूर प्रोटिन पाइने अन्डामा सेतो र पहेँलो भाग हुन्छन् । धेरैले ठानेका हुन्छन्, अन्डाको सेतोभन्दा पहेँलो भाग खानु लाभदायी हुन्छ…